Uhie okpu Enterprise Linux 7.7 New Version wepụtara | Site na Linux
Wepụtara ọhụrụ mbipute nke Red okpu Enterprise Linux 7.7
Izu gara aga Ndị ọrụ Red Hat gosipụtara ụdị nkesa ọhụrụ nke nkesa ahịa ha, na-eru nsụgharị ya Uhie okpu Enterprise Linux 7.7.
Alaka RHEL 7.x na-esonyere na ngalaba RHEL 8.x ma a ga-akwado ya ruo na June 2024. Mwepụta nke RHEL 7.7 bụ nke kachasị ọhụrụ na ngalaba kachasị nke nkwado zuru oke, nke gunyere nkwalite arụmọrụ. RHEL 7.8 ga-abanye na mpaghara mmezi, ebe ihe kachasị mkpa ga-agbanwe gaa na ndozi ahụhụ na nchekwa, yana obere nkwalite metụtara usoro ihe ngwaike dị mkpa.
1 Ihe dị ọhụrụ na Red Hat Enterprise Linux 7.7
2 Etu ị ga - esi nweta ụdị ọhụụ a nke Red Hat Enterprise Linux 7.7?
Ihe dị ọhụrụ na Red Hat Enterprise Linux 7.7
Na ụdị ọhụrụ a nbata nke nkwado zuru oke maka iji ihe eji eme ihe (kpatch) iji kpochapụ adịghị ike na Linux kernel na-enweghị ịmalitegharị usoro ahụ, nke bụ atụmatụ magburu onwe ya iji zere ịkwụsị ọrụ. Na mbu, kpatch bu ihe nlere.
Tinyere nke a, ihe owuwu niile nwere nkwado IMA (Iguzosi ike n'ezi ihe Mbezi) iji nyochaa iguzosi ike n'ezi ihe nke faịlụ na metadata metụtara ya na nchekwa data nke ihe nchekwa echekwara na modul nyocha agbatiri (EVM) iji kpuchido njirimara nke faịlụ agbatị (xattrs) site na mwakpo ebumnuche imebi iguzosi ike n'ezi ihe ha (EVM) agaghị ekwe ka mwakpo na-adịghị n'ịntanetị, nke onye na-awakpo ahụ nwere ike ịgbanwe metadata, dịka ọmụmaatụ, na-ebudata na diski gị).
Ndi agbakwunye ngwaọrụ dị mfe iji jikwaa akpa dịpụrụ adịpụ n'iji tragaji emere maka Buildah, ka o gbaa - Podman ma di njikere icho onyonyo - Skopeo.
Yana ngwungwu ohuru nke Python3 ya na onye ntụgharị okwu Python 3.6. Na mbu, Python 3 naanị zigara ya Red Hat Software Collections. Site na ndabara, Python 2.7 ka na-enye (ntụgharị nke Python 3 ka emere na RHEL 8).
E tinyela ihe ngosi egosiri na njikwa window Mutter maka ndị ọrụ niile na sistemụ (ọ dịkwaghị mkpa ịhazi ntọala ngosi iche iche maka onye ọrụ ọ bụla.
Na onye nhazi ihe eserese, agbakwunyela nkọwa iji nyere ọnọdụ multithreading n'otu oge (SMT) na sistemụ na mmepụta nke ịdọ aka ná ntị kwekọrọ.
A na-enye nkwado zuru ezu maka Nhazi Ihe Oyuyo, ihe onyonyo maka igwe ojii gburugburu tinyere Amazon Web Services, Microsoft Azure, na Google Cloud Platform tinyere nkwado ntughari nke ịba uru v-v.
Nke a bụ maka iji igwe arụmọrụ dabeere na KVM na SUSE Linux Enterprise Server (SLES) na SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) ejiri ya na ndị na-abụghị KVM hypervisors. Mụbara arụmọrụ na ntụkwasị obi nke VMWare mebere igwe akakabarede. Agbakwunyere nkwado maka ịtụgharị igwe mebere iji UEFI firmware iji rụọ ọrụ na Red Hat Virtualization (RHV).
SSSD (Ọrụ Nche System Daemon) na-enye nkwado zuru oke maka ịchekwa iwu sudo na Active Directory. Ebe maka nrụnye ọhụrụ iji chebe megide mwakpo Specter V2, usoro ndabara na-eji usoro Retpoline eme ihe ("specter_v2 = retpoline") kama IBRS.
N'ime mgbanwe ndị ọzọ kwụpụtara na mgbapụta ọhụụ a anyị hụrụ:
Ejiri emelitere ngwugwu gcc-n'ọbá akwụkwọ na ụdị 8.3.1. Gbakwunye ngwungwu-sap-c ++ - 8 ngwugwu nwere ụdị dị iche iche nke ọbá akwụkwọ libntdc ++ oge dakọtara na ngwa SAP.
Ebumnuche ahụ gụnyere nchekwa data Geolite2, na mgbakwunye na nchekwa data Geolite, nke a na-enye na ngwugwu GeoIP.
Ejirila 4.0.T sistemụ ihe eji arụ ọrụ usoro ihe ntanetị dị na ngalaba 3.14, yana emelitere ndagwurugwu Valgrind debugging toolkit ka ọ bụrụ ụdị nke XNUMX.
Emeziwo vim editọ na mbipute 7.4.629.
Ruo mbipute 1.0.35 emelitere edozi edozi maka usoro ntinye nyocha. Achọpụtala usoro nyocha nchọgharị na mbipute 1.13.4. Agbakwunyere klaasị ọhụụ ọhụrụ.
E tinyela eserese ọhụụ na ndị ọkwọ ụgbọala na ntanetị. Emelitere ndị ọkwọ ụgbọala dị ugbu a.
Etu ị ga - esi nweta ụdị ọhụụ a nke Red Hat Enterprise Linux 7.7?
Ihe oyiyi nwunye RHEL 7.7 dị maka nbudata maka ndị ọrụ edebanyere aha naanị site na Portal Customer Portal ma dị njikere maka x86_64, IBM POWER7 +, POWER8 (nnukwu endian na obere endian), na IBM System z ụkpụrụ ụlọ.
Enwere ike ibudata koodu ntinye maka ngwugwu ahụ site na ọdụ nchekwa nke CentOS Git.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Wepụtara ọhụrụ mbipute nke Red okpu Enterprise Linux 7.7
Na-eche ka mgbanwe ndị a ruo ebe obibi ...
You maara ihe ọhụrụ ọ bụla na desktọọpụ?
Versiondị ọhụrụ nke Ruby 6 rutere na nkwado maka ọtụtụ ọdụ data